Ny Pick Ax, ampiasaina amin'ny fanaingoana. Ny pickaxe amin'izao fotoana izao dia manana tendrony roa. Ny tendrony farany dia ampiasaina amin'ny faritra be vato na simenitra. Ny faran'ny faharoa dia fisaka ary ampiasaina indrindra amin'ny fanaovana prying. Miaraka amin'ny loha mavesatra toy izany sy teboka kely ifandraisana eo amin'ny tendron'ny loha dia lasa fitaovana mandaitra tokoa io fitaovana io ho an'ny faritra mihamafy sy be vato ary mivaingana.
Ny fitaovana lehibe Gemlight Pickaxe dia vy lehibe China # 45. Matetika izahay dia mampiasa vy vy. Ny pickaxe anay rehetra dia vatan'ny pickaxe feno hafanana sy fordged haka endrika sy famaky. Ny pickaxe rehetra dia loko marifotra. Ny henjana dia HRC42-52. Sady hamafisana no henjana izay mety hampiasana ela ny pickaxe. Ny pickaxe Gemelight dia mateza sy avo lenta mba hahazoana antoka fa ho afaka hitondra ny fiantraikan'ny fifandraisan'ny velaran-tany sy ny vato.
Ho an'ny mpamboly sy zaridaina ary ireo mpitrandraka aza dia manampy azy ireo hamita ny asany tsy misy fahasahiranana ny mpamaky paingotra Gemlight. Raha mitady famaky amidy ihany koa ianao dia zahao ny safidin'ny vokatra etsy ambony.
Logo namboarina (Min. Order: 9000 Pieces)
Marika namboarina (Min. Order: 9000 Pieces)
Azo omena ihany koa ny tahony, 90cm na 120cm
Marika Gem Cock na B-akoho maneno Cock MODELY P401
Marika Gemlight Na OEM / ODM ara-nofo Haja karbaona avo vy amin'ny alàlan'ny Rail Way
Lanja 5LB 5.5LB Blade Hoe Fitsaboana hafanana feno
Blade Forge Type Adidy mavesatra forge iray tapa Hamafin'ny Blade pickaxe HRC32-42
Surface pickaxe Menaka manohitra harafesina voaravaka, ary loko miloko. Loko Blazy pickaxe Mainty ny vatany, milomano ny loha
Karazan-mason'ny pickaxe Round Coil 6 # Blade Shape Conical ary iray hafa dia angady kely tery
tahony Misy 90cm Beech Wood Blade Edge Taper fanamiana hatramin'ny sisiny manapaka
P404Ny famaky làlambe
P406 Fisafidianana omby
P410 Ny famaky làlamby
Mandavaka, mamboly, mana-ahi-dratsy sns.
Hita ao anaty boaty hazo na baoritra
Manana fanandramana amin'ny famatsiana UN FAO izahay. Tongasoa ny fanontanianao ary mahazoa fampahalalana bebe kokoa amin'ny varotra anay!
Teo aloha: Fordged Hoe
Manaraka: Machete Knife
Pickaxe amin'ny fambolena